Igcine ukubuyekezwa: May. 23 2019 | 3 imiz ufunde
Ukuba wingwoman kuyinto umsebenzi obalulekile! Kufanele siqinisekise ukuthi bakha ukuzethemba kanye ngiphakamisa izingcezu konke ngesikhathi esisodwa. Kodwa yilokho umngani i ngethemba bazokwenzani okufanayo uma isihlangu ivuliwe olunye unyawo. Ngiye behlangene amathiphu kodwa ngicabanga iyiphi wingwoman kuwufanele usawoti wakhe uyazi kukhona a zillion more. Ngendlela Ngicabanga yimuphi wingwoman uyazi ukuthi thina njalo ukufunda emsebenzini – futhi hhayi ngisho isikhokhiwe!
Umngani wakho uyohlangabeza abanye kubantu abesabekayo endleleni. Ngeshwa lokho kuphila. Kodwa ngenkathi wena ngeke benze lutho mayelana ukuthi uzodinga ukuba khona ukwambula ivulekile Ben & ngemva Jerry futhi nje kube khona kubo. Siqinisekise ukuthi bayazi ukuthi akenzanga lutho okungalungile futhi ukuthi uzoba ukuhlangabezana kangcono umuntu ehlelelwe nazo nasesikhathini esizayo. Ngokusobala uma beye bathi izinto eziningi unya the break-up cishe ngeke zidlule ezinye zalezi ngokuningiliziwe noma umane ulalele. Ngoba babé ubuhlungu kuyodingeka uthole ukuthi aphume ohlelweni lwabo. Oh futhi nakanjani negative mayelana ex!
• Ukuqinisekisa ukuthi aphephile
Ngikhumbula ngesinye kokuzwa iqembu labangane ukukhuluma nokuzwa enye intombazane ukhuluma ngani uya ekhaya guy ukuthi kwaba kancane Creepy ebusuku ngaphambi. Ngenhlanhla kade konke kuhamba kahle kodwa yena washikashikeka kancane ukuphuma endlini yakhe ngosuku olulandelayo. Ukusabela kwami ​​osheshayo kwaba kungani ayikho neyodwa kuzo hamba naye uma engayifezi kahle kancane Creepy uma bekufanele sibe abangane bakhe? Ngicabanga kungase kube nzima kancane ngoba kunzima uvumele endlini umfana uma uke akamenyiwe kodwa ngicabanga mathupha uma Ngacabanga umngane wami womshado wayeya ekhaya nge ungangena Ngizobe uzame yami sekukaningi ngisho ukube zazicabanga Ngangibathukuthelele ngokudlulele ukuze uthole in balale kusofa! Ngokuhluleka ukuthi ngiyoke ngikwazi ukwenza isiqiniseko ukuba abe ocingweni ukuze babone uma they were alright. Ngokusobala ukwesaba ukuthi bangase bacabange ukuthi Kuzofika ngaphesheya-ultraviolet kodwa ngicabanga ngokuhamba kwesikhathi umngane niyokwazi nenza it for baphephile. Futhi kungcono kakhulu kunobuhlungu ehlukile kungenzekani umngani wakho futhi yini ke kuyadabukisa ukuthi ngokuvamile kanjalo.
Having Essentials On eceleni
Yileso bit esindayo kwenziwe engxenyeni odlule. Manje ungene izinto ezijabulisayo! Noma yimuphi wingwoman uyazi ukuthi uzodinga izinduku zenu of ukwakheka, izinwele amabhlashi, Combs, njll … kuma-by. Ngaleyo ndlela uma kungaba ngawe ubona umuntu omthandayo ongakwenza kokubili share nabanye izinto omunye angase sebekhohliwe ukuze bheka Knockout futhi agcizelele ukuthi othile okhethekile.
Angikho bethi udinga ube Oscar-uyakufanelekela noma yini okunye okunjalo. Angikwazi isinyathelo izinkinobho kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzofunda isinyathelo ukuthi unentshisekelo uma ungekho ikakhulukazi. Into abantu lapho uthanda khona umuntu ophambana nelungelo (Futhi akekho noyedwa kithi kungaba Diss ubani ngoba akuwona wonke besilokhu khona!) ngukutsi ukukhuluma ngabo kangaka. Futhi wena ngeke kakhulu nesithakazelo konke abakushoyo sonke isikhathi, kodwa isikhathi esiningi wena nje udinga ukuba ukumamatheka futhi interject ngamazwi like “Ngempela?”, “Oh cool.”, “Yeah, romantic kangaka” futhi kumelwe ube emihle. Ziyakwazi ayenesithakazelo kangaka ohlwini ukhuluma ngani umuntu bayohlala angaluboni.
Yiba atholakale Xoxa
Uma usebenza noma whatever ngesikhathi kuhlukile. Kodwa uma into wenza ukuthi ungakwazi ukulinda njalo ukubeka umngane wakho kuqala uma kokuba kube indaba enkulu ukuthi kudingeka akhulume nawe mayelana. Uma abakwenzayo njalo angeke yini eyenziwe noma babengeke benze okufanayo ngawe in ukubuya ungase kudingeke uhlaziye ukuthi kodwa uma une abangane abahle kube khona ngabo, bheka them futhi awukwazi ngempela ukwenza noma yikuphi okungaphezu kwalokho njengoba wingwoman okuhle noma umngane.